Talooyinka muhiimka ah ee guurka ka hor - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, ullstein bild
Waxayna qoysaskaasi nus qarniga noolasha ku mideysnaa ay sheegayaan iney muddo intaa dhan ay wada noolaadaan ay ugu wacneed "Samir iyo Iisu dulqaadasho".
"Labada qof ee isqaba ama wada nool midkood inuu khalad ka dhaca waa lagama maarmaan balse iney khaladka dhacay si deggan ay u xalliyaan ayaa u horseedaya iney noolal farxad leh ay ku noolaadaan" ayey tiri Marwo Ababa.
Bariyahan dambana waxaa aad u badan qoysas wada nool oo aan aarimaha qoyskooda ka wada hadli karin, kuwa u wada nool carruurta iney wada korsadaan oo keli ah, ama aan kalsooni isku qabin.
Haddaba isfaham la'aanta noocaasi marka uu sii ballaadho wuxuu horseedayaa qoysaski dhisnaa iney burburaan oo la kala tago.
Maxay yihiin waxyaabaha guurka khatar geliya?
Tigist Waaltangus iyo Indaalki Asafa waxay muddo ka badan 10 sano ay ka shaqeeyaan la talinta iyo xallinta khilaafaadka ka dhasha guurka iyaga oo ka wada tirsan urur arrimahan ka shaqeeya.
Mar wax laga weydiiyey waxyaabaha guurka khatarta geliya ee burburka horseeda waxay sheegeen iney kow ka tahay aqoonta ay lammaanuhu u leeyihiin guurka iyo xiriirka jeceyl waxa ay kala yihiin.
"Guurku wuxuu ka billaabmayaa qofka laftiisa" marka inta uusan qofku fiirin qofka uu noolasha la wadaagayo waa inuu marka hore isagu is fiiriyaa, ayey Tiri Khabiir Tigist.
Marwo Ababa waxay sheegtay Soddohdeed iyo Soddoggeed oo ay u aqbashay una soo dhaweeysay sida labadeyda waalid inuu qayb weyn ka qaatay iney guur farxad leh oo muddo dheer soo jira ay nasiib u yeelato.
Ragga iyo dumarkaba marka ugu horreysa oo ay noolasha ku midoobaan waxay isku dayaan midba midka kale inuu isku dayo inuu iisu muujiyo sida malaa'igti oo kale oo qof wanaagsan uu iisu muujiyo balse xaalku dib ayuu ka xumaanayaa.
"Dhibaatooyinka iyo dabeecadaha qarsoon ee dhabta ah oo uu qofku leeyahay oo dhan dib ayey ka soo baxayaan, maadaamaa inta la wada nool yahay noolasha wax badan oo wanaag ama xumaan ah lagala kulmayo" ayey tiri.
"Dadka doonayo iney reer yagleelaan sida ay jeebkooda iyo akaawunka bangigooda u eegaan, waa iney dib u fiiriyaan aragtida qofka iyo waxa uu naftiisu ka aaminsan yahay" ayey tiri Tigist.
Lammaane guur ku heshiiyay iyagoo KFC jooga oo Twitter-ka qabsaday
Dhibaatooyinka ugu badan ee sii huriyay dhibka qoysaska ka dhex dhaca ayaa sida oo kale la sheegaa iney ugu wacan tahay ururro ama hay'ado arrimaha guurka bulshada kala taliyo oo aan jirin haddii ay jiraan ay awooddooda kooban tahay.
Haddii ay sidaa sameyn waayaan dhibaatooyinka guurka kaddib yimaaddo xallintooda qof ayey dusha ka fuuleysaa marka uu qofkaasi u dulqaadan waayana wuxuu u horseedaya inuu qoyska burburo.
"Guurku sidiisaba waxaa lagu hagaa aqoon, karti iyo dulqaad" ayuu yiri Khabiir Indaalki.
Haddaba aqoonta guur ee loo baahan yahay waa iney su'aalahan ka jawaabaan:
Xigashada Sawirka, Tigist WalteNigus and Endalk Facebook pages
Khabiirro ku takhasusay la talinta arrimaha guurka Tigist Waltenigus iyo Indaalki Asafa
"Guurka ujeeddadiisu iney ka ballaadhan tahay in guri lagu wada noolaado ama ubad la dhalo oo keli cid labada qof ee isguursaneyso kala taliyana waa lo baahan yahay" ayey tiri Tigist.iwmwuuu k aballaadhan yahay
Nin guur-doon ah oo sameeyay ficil ay dad badan la yaabeen
Labada qof ee isguursaneysa oo dabeecadahooda rasmiga ah oo ay leeyihiin ilaaheyna uu ku abuuray aan kala qarsan oo iisu sheego waxay iyaduna gacan ka geysaneysaa qofka marka uu wax ku saabsan dabeecaddiisa kala kulmo qofka kale iney ku soo boodda ku noqoneyn maadaamaa uu horay ugu sheegay dabeecaddiisaasi.
Khubaradu "Guurkaaga haddii aad ku faraxsaneyn xalku ha noqdo furriin oo keli ah"
"Labada qof ee sida dhabta ah iisu jecel jeceylkooda ay keydiyeen waxay la soo baxaan xilliga dhibka uu yimaaddo" ayey leeyihiin khubarada arrimaha guurka ku takhasusay.
Labada qof ee isguursanaya waa iney lahaadaan hadaf mideysan, haddiise hadafkoodu uu marki horaba mideysneyn muddo marka la wada noolaado aragtida ayaa lagu kala duwananaanayaa taasoo ugu dambeynti khilaaf uu ka dhalan karo.
Hadafkoodu ugu weyna waa iney ka dhigaan mar weliba iney dhisaan naftooda, dabeecadahooda, hab dhaqankooda iyo wax kasta oo wada noolaashahooda sii xoojin kara.
Wax la dhisana waxaa ugu wanaagsan jeceylka ay lammaanaha iisu qabaan, maadaamaa jeceylku uusan marnaba duugoobin isla-markaana uu dhammaan, waxa ka soo hara oo dhan ay dhammaanayaan ayna isbeddelayaan.
Muuqaal ayaa laga arkay Steven Weber oo gacalisadiisa guur ka dalbanaya isagoo kasoo eegaya daaqad muraayad ah oo biyaha hoostooda ah, meel ka baxsan xeebta dalka Tanzania
22 Sebtembar 2019